Dawladda iyo mucaaradka oo siyaabo kale duwan uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Muqdisho. [Akhris …] – Radio Daljir
Dawladda iyo mucaaradka oo siyaabo kale duwan uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Muqdisho. [Akhris …]
Juunyo 18, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, June 18- Dawladda KMG ah ee Soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii maalintii shalay ahayd ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyo deegaanno ku hareeraysan, kaasi oo geystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.
Afhayeen ciidanka maltariga dawladda KMG ah ee Soomaaliya Farxaan Carsaanyo oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegay in ay ka guulaysteen kooxihii mucaaradka ahaa ee Al-shabaab iyo Xisbul islaam, kadib markii dagaal dhiig badani ku daatay uu shalay ka dhacay degmada Hodon.
Afhayeenku waxaa uu intaasi ku daray in aysan jirin wax khasaarooyin ah oo ciidankooda soo gaaray marka laga reebo dhaawac 2 askari oo uu sheegay in ay soo gaareen dhaawacyo sahlan waa sida uu hadalka u dhigaye, wuxuun dhanka kale sheegay khasaaro badan in ay u geysteen kooxihii ay la dagaallameen.
Dawladdu waxay sidoo kale iska fogaysay madaafiic ay rideen in ay waxyeelleeyeen dad rayid ah arrintaasi oo oo ahayd mid lagu eedaynayey dawladda iyo ciidamada nabad illaalinta ah ee AMISOM, in ay ku tallaabsadeen hub aan loo meel-diyin oo lagu ganay goobo ay degganyiin dad shacab ah.
Dhanka kale Sh Muuse Cabdi Carraale, oo isna ah afhayeen ururka Xisbul Islaam ayaa sheegay dagaalkii shalay in ay ku jabiyeen wax uu ku tilmaamay gaalo-raacyo u soo guntaday baabi’inta dadka rayadka ah, wuxuuna intaasi sii raaciyey in ay toogasho ku dileen saraakiil sar sare oo miisaan weyn ugu fadhiyey dawladda waa sida uu hadalka u yiriye.
Shiikhu waxaa kaloo uu carrabka ku dhuftay in ay qabsadeen hub iyo saanado kaloo milatari, isagoo intaasi ku sii daray dhammaanba goobihii lagu dagaallamay in ay haatan iyagu gacanta ku hayaan.
Khasaarada dagaalku uu geystay ee dhinacooda ayaa afhayeenka Xisbul Islaam waxaa uu sheegay in uu yaraa laakiin dhibaatada ugu weyni ay soo gaartay garabkii kale ee ay la dagaallameen, wuxuuna sheegay khasaarahooda in ay uga naxdin badan tahay midd shacabka soo gaartay oo uu dawladda ku eedeeyey in ay mas’uul ka yihiin.
Inkastoo dawladda iyo mucaaradkuba sheegteen khasaarooyin kooban oo soo gaaray iyaga ayaa sida laga soo xigtay goobaha caafimaadka waxaa ku dhintay dagaalkaasi in ka badan 53 qof halka in ka badan 108 kalana ay ku dhaawacmeen, dadkaasi oo isku jira labadii garabka ee dirirtu dhaxmartay iyo dad shacab ah oo ka ag-dhawaa goobalaha lagu dagaallamay.
Maanta ayaa xaaladdu tahay mid deggan inkastoo mararka qaar la maqlayo dhawaqa rasaasta oo ka dhacay deegaannadii lagu dagaallamay maalintii shalay ahayd, waxaana sii kordhaysa tirada barakacayaasha kuwaasi oo ku sii qul-qulayada duleeddada magaalada Muqdisho si ay uga baxsadaan iska hor imaadada hadda ka soo cusboonaaday halkaasi.
Caraale, afhayeenka Xisb al Islam oo sheegay in dilka Cumar Xaashi uu ku faraxsan yahay. Dhegaysi …
Dagaal dad badani ku dhinteen oo ka dhacay xaafadaha Halwadaag, Hodan, Xariyaale, Cali Kabiin & Xamar Bile ee magaalada Muqdisho. Dhegaysi …